Onye Na-ele Anya Mgbasa Mgbasa Ozi | Martech Zone
Anaghị m emegide ya mgbasa ozi ọkọlọtọ, ma m na-emegide enweghị mgbasa ozi ọkọlọtọ nke na-enye oku dị ike iji rụọ ọrụ (CTA) n'akụkụ ọdịnaya dị mkpa e gosipụtara na ndị na-ege ntị. Ọtụtụ oge, m na-aga na websaịtị wee hụ ọkwa ọkọlọtọ nke enweghị ihe ọ bụla gbasara ọdịnaya ndị gbara ya gburugburu. A ọkọlọtọ ad best rụrụ mgbe ọ bụ CTA gaa ebe onye rutere na saịtị ma nwee olile anya ịga n'ihu.
Banner mgbasa ozi pụtara na mbụ na webụ na 1994 ma kemgbe ahụ ejirila ha mee ihe ọtụtụ na Internetntanetị. A na-eme ha ka ha bụrụ ndị na-ejide anya ma na-adọrọ mmasị ka ha wee nwee ike gbaa ndị ọbịa ume ka ha pịa azụmahịa ha. Ma, oke imepụta ha na ojiji ha emeela ka ndị na-ekiri nwee obi abụọ na ịnabata ha. Mgbe afọ 8 gasịrị, ndị mmadụ ka na-ada maka mgbasa ozi a mara mma?
Ihe omuma a sitere na ahia ahia, Onye na-elele Mgbasa ozi Banner, na-enye azịza nke ajụjụ ahụ.